| Service By Art
Service By Art
Tips--Guide News & Myanmar Ebook Share
News and IT Menu
Mobile Knowledge Menu
» Huawei Phones Clockworkmod Recovery များနဲ့သွင်းနည်း
Title: Huawei Phones Clockworkmod Recovery များနဲ့သွင်းနည်း
Author: Service.Art Rating5of 5
Des: Huawei Phones Clockworkmod Recovery များနဲ့သွင်းနည်း By Bo Sunny Lwin, Htay Hlaing Oo and Paing Linn in Myanmar Mobile Users Group...
By Bo Sunny Lwin, Htay Hlaing Oo and Paing Linn in Myanmar Mobile Users Group (Files) · Huawei Phone တွေရဲ့ Clockworkmod Recovery တွေကို ရှိသလောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိရင်လည်း တင်ပေးကြပါ အားလုံး အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ
ကျွန်တော့်မှာ မရှိတာတွေကို ကွက်လပ်ချန်ထားခဲ့ပါတယ် CWM အများစုက english ဘာသာနဲ့ပါ
သက်ဆိုင်ရာဖုန်းအလိုက် Clockworkmod သွင်းနည်းတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
တစ်ချို့ဖုန်းတွေ ကျန်ပါသေးတယ် အဆင်ပြေရင် cwm သွင်းနည်းတွေကို ထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်
အောက်မှာ clockworkmod recovery တွေကို download link ပေးထားပါတယ်
မှတ်ချက်-Huawei Android Phones Driver က လိုလိုမယ်မယ်ပေးထားတာပါ တစ်ချို့က cwm သွင်းရင်Driver လိုတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?4r6d1u8df71727c
Clockworkmod Recovery ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက
လက်ရှိ Rom ကို Back Up/Restore လုပ်လို့ရတယ်
Custom Rom တွေ တင်လို့ရပါတယ် Stock Recovery မှာ မပါတာတွေ လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်
----------- Password = spider -----------
C8600> http://db.tt/sXi8B6We (or) http://www.mediafire.com/?2q9oxurkff5r4g8
Rom Manager Premium>http://www.mediafire.com/?t7xigbao664l995
C8812>http://www.4shared.com/zip/-Csc8wPw/recovery5028_c8812.html C8812 Unlocked Bootloader>http://www.mediafire.com/?cbzsfanv7zun2px
U8661 Sonic + >http://www.4shared.com/rar/h6K_zUQn/Huawei_U8661_Sonic___Root.html
Clockworkmod Recovery သွင်းနည်းများ
------------------------------Install CWM on C8500------------------------------
C8500 ကို cwm သွင်းတာက လွယ်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာမှာ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက 双击升级Recovery.bat ဖိုင်ကို run ထားပါ
ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီးရင် vol down+green hand button+power တွဲနှိပ်ပါ
Huawei Logo(Fast Mode) တက်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ Windows command မှာ ဟိုစာတက် ဒီစာတက်ပြီး ဖုန်းက restart ကျသွားပါမယ်
CWM သွင်းပြီးသွားပါပြီ Vol Up+Power တွဲနှိပ်ပြီး Recovery Mode ထဲဝင်လို့ရပါပြီ
------------------------------Install CWM on C8600------------------------------
Rom Manager ကို ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားပါ
Download ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်ကို memory card ထဲထည့်ပြီးရင် အဲဒီဖိုင်ကို နှိပ်လိုက်ပါ အဲဒီနေရာမှာ ဘာ software နဲ့ ဖွင့်မလဲလို့မေးရင် rom manager ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
သူ့ဘာသာသူ အလုပ်လုပ်သွားမယ်ပါမယ် အဆင်မပြေရင် မူရင်းဝက်ဆိုက်ဒ်မှာ လေ့လာလို့ရပါတယ်Credit To Myanmar Mobile App Store>http://www.myanmarmobileapp.com/?p=1811
-------------------------Install CWM on C8650&C8800-------------------------
(C8650 ရဲ့ cwm ကို C8800 မှာသုံးလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် custom rom မရပါဘူးခင်ဗျာ root ဘဲရပါတယ်)
双击升级Recovery.bat ကို ကွန်ပျူတာမှာ run ထားပါ ဖုန်းပိတ် vol down+power ကို တွဲနှိပ်ပါ
Huawei logo တက်နေတဲ့ အချိန် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ
Windows command မှာ ဟိုစာတက် ဒီစာတက်ပြီး (ဘာစာမှ မတက်ပါက keyboard ကနေ
ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ပေးပါ)3seconds လောက်ကြာရင် keyboard ကနေ ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ပေးပါ
ဖုန်းက auto restart ကျသွားပါမယ် CWM ရပါပြီ Vol Up+Power တွဲနှိပ်ပြီး Recovery Mode ထဲဝင်လို့ရပါပြီ
မှတ်ချက်-C8800 ကို C8650 ရဲ့ cwm သုံးရင် custom rom တင်လို့မရပါဘူး အပေါ်ကလင့်မှာ C8800 အတွက် သက်သက် cwm ရှိပါတယ် အဲဒီ cwm ကို သုံးမှ custom rom တင်လို့ရမှာပါ
------------------------------Install CWM on C8810------------------------------
Recovery.bat ကို ကွန်ပျူတာမှာ run ထားပါ
ဖုန်းပိတ် vol down+power ကို တွဲနှိပ်ပါ Huawei logo တက်နေတဲ့ အချိန် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် keyboard ကနေ space
အားလုံးပြီးသွားရင် ကြိုးဖြုတ် battery ဆွဲဖြုတ်ပြီး
Vol Up+Power နဲ့ recovery mode ထဲဝင်လို့ ရပါပြီ
------------------------------Install CWM on C8812------------------------------
Download ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်ကို computer မှာ run ထားပါ
ဖုန်းပိတ် vol down+power ကို တွဲနှိပ်ပါ Huawei logo တက်နေတဲ့ အချိန် ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် keyboard ကနေ enter
နှစ်ချက်ပေးပါ ဖုန်းက auto restart ကျသွားပါမယ်
CWM ရပါပြီ Vol Up+Power တွဲနှိပ်ပြီး Recovery Mode ထဲဝင်လို့ရပါပြီ
မှတ်ချက်-ဒီရဲ့ cwm ကို ics မှာသုံးဖို့ bootloader unlocked ဖြစ်မှ ics
အတွက် ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ် အရင်ဆုံး bootloader ကို unlocked လုပ်ပြီးမှ cwm တင်ပါ Credit To Ko Kyat Ka Lay
Bootloader Unlocked လုပ်နည်းက ဖုန်းမှာ usb debuggin on ထားပါ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင် bootloader.exe ကိုcomputer မှာ run ပြီး root အောက်က Unlock Bootloader နှိပ်လိုက်ပါ ဖုန်း retoot ကျသွားပြီးရင် ရပါပြီ ------------------------------Install CWM on U8650------------------------------
ClockWorkMOD 5.0.2.7 (Bootloader-Volum DOWN+ POWER).bat ကို ကွန်ပျူတာမှာ run ထားပါ
ဖုန်းပိတ် vol down+power ကို တွဲနှိပ်ပါ
Windows command မှာ ဟိုစာတက် ဒီစာတက်ပြီး ဖုန်းက restart ကျသွားပါမယ်
---------------------- Install CWM on U8661 & U8661 + -----------------------
ဒီဖုန်း မော်ဒယ်နှစ်ခုက နည်းတူပါတယ် zip ဖိုင်ထဲမှာလည်း ပြုလုပ်နည်း document ပါဝင်ပါတယ်
ဖုန်းပိတ် vol down+power နဲ့ fast mode 10 seconds ၀င်ပါ
ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ထဲက roottool.bat ကို computer မှာ run ပြီး ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကိုUSB ကြိုးနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ သူ့ဘာသူ အလုပ်လုပ်သွားမယ် ဖုန်း reboot ကျပြီး ပြန်တက်လာရင်CWM သွင်းပြီးသွားပါပြီ Vol Up+Power တွဲနှိပ်ပြီး Recovery Mode ထဲဝင်လို့ရပါပြီ
------------------------------Install CWM on U8860------------------------------
Download လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို recovery.img လို့ နာမည်ပေးပြီး Desktop ပေါ်မှာ ထားပါ
ဖုန်းပါဝါပိတ်ပြီးရင် Vol Up+Vol Down+Power တွဲနှိပ်ပါ ဖုန်းမှာ screen ပန်းရောင်ကြီးပေါ်လာရင်
Computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ ကွန်ပျူတာမှာ removal drive ပေါ်လာရင် ၀င်လိုက်ပါ
အဲဒီထဲမှာ recovery ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ် ဖိုဒါထဲက recovery.img ကို oldrecovery.img လို့နာမည်ပေးပါ
ပြီးရင် destkop ပေါ်က recovery.img ကို ခဏက folder ထဲထည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဖုန်း battery ဆွဲဖြုတ်ပါ
Document ကို ပြင်ရင်းနဲ့ ဖုန်း မော်ဒယ်နှစ်ခုဘဲ ကျန်ပါတော့တယ် ဒီဖုန်းနှစ်လုံးရဲ့ cwm သွင်းနည်း သိပါက ဒီရဲ့ Document ကို ဆက်လက်ဖြည့်သွားနိုင်ပါတယ် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ့်ဖုန်းလေးတွေကို ပိုမိုကလိနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ from By Bo Sunny Lwin
အမှားပါရင် ဝေဖန်အကြံပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
LOAD MORE POST ကိုနှိပ်ပြီး Post များထပ်မံ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်
"ပုညခင်"စာအုပ် (၅၇)အုပ် စုစည်းမှု
ဘီလူးစီးခံရခြင်း (သို့) ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခြင်း
မင်းသိင်္ခ စာအုပ် အသစ်များ ၂၀၁၅ ထွက် စုစည်းမှုပါ....
Huawei ဖုန်းများအတွက် မော်ဒယ်အလိုက် firmware Download List
မြန်မာ့ လူမျိုးစုများ၏ နာမည်များ
ထူးအိမ်သင် ၏သီချင်း အယ်ဘမ်လ်များ စုစည်းမှု
လူနေ စာအုပ်များ ထွက်ထားသမျှ စုစည်းမှု
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သိသင့်သော ဗုဒ္ဓဂယာ သမိုင်းအကျဉ်း
INTERNET DOWNLOAD MANAGER 6.23 BUILD 23 CRACK PATCH FULL VERSION Menstrual Suppression ရာသီမလာအောင်နှိမ်ခြင်း
android rootingaguide
Collect Web Site address
Samsung Firamware များ
Sony Firmware များ
ကွန်ပြူတာ အမေး ၊ အဖြေ စာအုပ် များ
ကိုအာကာ - S/W and H/W စာအုပ်များ
ခင်မောင်ညို ဘောဂဗေဒ စာအုပ်များ
ဆန်းလွင် အိုင်းစတိုင်း စာအုပ်များ
ဒဿဿ နကျော်စွာ စာအုပ်များ
နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား စာအုပ်များ
ပတ္တမြား တောင်ပိုင်း သတင်း
မင်းသိန်း- စက်မှု စာအုပ်များ
မသိတာ (စမ်းချောင်း) စာအုပ်များ
မြိုင်ရာဇာတွပ်ပီ ဆွေမင်း၊ ဓနုဖြူ
ဒေ၀တာ သရဲ စာအုပ်များ
မောင်ညိုမှိုင်း- သန်လျင် စာအုပ်များ
Service By Art © . All Rights Reserved.
Service.Art. Powered by Blogger.